Gbanwee Turpial iji jikọọ StatusNet | Site na Linux
Gbanwee Turpial iji jikọọ StatusNet
Dị ka m gwara gị, a bụ m eji Hotot ijikọ na ihe nkesa Ọnọdụ na anyị mejuputa na netwọkụ ọrụ m.
Isi okwu ya bụ, otu n’ime ihe ndị ọzọ masịrị m nke kachasị Turpial, n'ihi ugwu ya na interface ya, ma ọ nyeghị m nhọrọ nhazi nhazi, ma e wezụga ijikọ Twitter ugbua Identi.ca. Ma mgbe ahụ, echere m: Turpial es Mepee uzo edekwara ya Python eziokwu? Gini mere igbanwe ya ka o were jikota ebe m choro?
Amalitere m ileba anya wee chọta faịlụ m chọrọ, nke nwere mmasị maka ya Identi.ca en /usr/share/pyshared/turpial/api/protocols/identica/identica.py. Site na faịlụ ahụ naanị ahịrị ndị masịrị m bụ ndị a:
Kedu nke m gbanwere, na-ahapụ ya dị ka nke a:
Njikere. Echekwara m faịlụ ahụ (ana m echekwa tupu oge a) wee gbuo ya Turpial. Ahọrọ m ohere site na Identi.ca, M tinyere data m na voila !!!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Gbanwee Turpial iji jikọọ StatusNet
Kpachara anya n'ihi na otu ọrụ ma ọ bụrụ na ha hụ na ị tinyere "er tweet" ị nwere ike ịga ebe anyị ma ama ...
Hahaha ọlị. Anyị melite usoro ihe a na netwọk nke ISP m .. ..
Mwute na ọ bụ GTK ... ọ bụrụ na ọ bụ Qt ga-amasị m ya karịa 😉
Enwere m obi ụtọ karịa Choqok hehe ...
Otu dika nke TavK7. Agbanyeghị na Hotot adịghị njọ ma ...
Muon Suite v1.2.1 wepụtara [Nkọwa]
Ambiance + Radiance = Resonance Gtk Okwu